9B Isiqithi saseHarris Indawo yokutyela Ukulala 4 - I-Airbnb
9B Isiqithi saseHarris Indawo yokutyela Ukulala 4
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguMike And Jules
UMike And Jules yi-Superhost
Sime nje iikhilomitha ezi-5 ukusuka kwisikhululo sesikhephe saseTarbert esinembono entle yolwandle ejonge eHarris naseScalpay. Sikufutshane nezinto eziluncedo kuzo zombini iTarbert kunye neScalpay. Ikwindawo efanelekileyo yokuhlala ngoxolo kunye nembonakalo entle ngelixa ungekho kude neHarris Distillary, iHarris Tweed shop & West Harris beach. Imizuzu nje engama-20 ukuya kunxweme oluhle lwaseLuskentyre.
Igumbi elizimeleyo elinomnyango walo wangaphambili (sihlala kwesinye isiqingatha se-bungalow kodwa akukho zithuba zangaphakathi ekwabelwana ngazo)
Ukulala 4 kunye nePet Friendly (intlawulo eyongezelelweyo ye-£ 10 ngenja nganye ngokuhlala)
Igumbi lokulala eliphindwe kabini elinemibono yolwandle kunye negadi
Igumbi lokulala elinamagumbi amabini okulala
Ikhitshi leendwendwe/igumbi lokutyela elineendawo zokupheka ezigcweleyo
Indawo yokuphumla yeeNdwendwe kunye neTV enombono wolwandle
Ukhetho lwesidlo sakusasa alusafumaneki ngenxa yokungena eluntwini
4.93 · Izimvo eziyi-322
Indawo ezolileyo kakhulu kunye nembonakalo entle enemibono enomtsalane kumanzi ukuya eScalpay naseHarris. Ukubonwa rhoqo kwamaxhalanga egolide kunye nolwandle ukusuka endlwini kunye namatywina, i-otters kunye ne-porpoises.
Sikufutshane ne-Scalpay apho unokonwabela ukuhamba uye kwi-Eilean Glas lighthouse kwaye ikuvuze ngemibono emangalisayo ngaphesheya kwe-Minch ukuya eSkye kunye ne-Skotlani enkulu. Sikwakufutshane nebhaso eliphumelele iNorth Harbour Bistro eyindawo entle yokutya ngaphandle kwesidlo sasemini okanye sangokuhlwa. Ngoku ivaliwe ngenxa ye-COVID19
Umbuki zindwendwe ngu- Mike And Jules
Sihlala kwisakhiwo esinye kodwa akukho zithuba zangaphakathi ekwabelwana ngazo. Ukukhusela iindwendwe zethu, uluntu lwesiqithi kunye nathi siya kuba sisondelelene noluntu kodwa sikhona kwaye sonwabile ukunika naliphi na icebiso ukwenza ukuhlala kwakho kube kokonwaba.
Sihlala kwisakhiwo esinye kodwa akukho zithuba zangaphakathi ekwabelwana ngazo. Ukukhusela iindwendwe zethu, uluntu lwesiqithi kunye nathi siya kuba sisondelelene noluntu kodwa sik…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Harris